XOG XASAASI: Madaxweyne Farmaajo oo dalbaday in loo kala dhex-baxo isaga iyo Axmed Madoobe | SMC
Home WARARKA MAANTA XOG XASAASI: Madaxweyne Farmaajo oo dalbaday in loo kala dhex-baxo isaga iyo...
XOG XASAASI: Madaxweyne Farmaajo oo dalbaday in loo kala dhex-baxo isaga iyo Axmed Madoobe
Ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay oo ka tirsan Madaxtooyada Soomaaliya iyo Madaxtooyada Galmudug, ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu codsaday in loo kala dhax-baxo isaga iyo Madaxweynaha Bubaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe.
Wuxuu sidoo kale isku dayey inuu wada-hadalsiiyo madaxweyne Farmaajo iyo Axmed Madoobe, hase yeeshee Xogta aan helnay ayaa sheegeysa in Madaxweyne Farmaajo uu dalbaday in loo kala dhaxbaxo isaga iyo Madaxweynaha Bubaland si ay uga wadahadalaan arrimaha gobalka Gedo oo qeyb ka ah waxyaabaha ay u xayirantahay doorashada Soomaaliya.
Ka sokow labada madaxtooyo, xildhibaano ku dhow dhow Madaxweynayaasha Galmudug iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa sidoo kale xaqiijiyey xogtan.
Wararka aan helnay ayaa sheegay in dalabkaan uu yimid kadib markii inta kale ee doorashada la isla fahmay basle qodobkaan uu aad u adkaaday taasina ay keentay in Madaxweyne Farmaajo uu dalbaday in loo madaxbaneeyo arimaha gobalka Gedo isaga iyo Madaxweynaha Bubaland.
Previous articleAMISOM oo saraakiil Boolis ah usoo xirtay tababar
Next articleAskar ka tirsan Ciidanka booliska oo lagu dilay dagaal ka dhacay Matabaan